Orchid reproduction | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Orchid reproduction
Fomba fikarakarana tranon-koditra misy tavy
Ny mahagaga momba ny natiora, izay manintona ny sainay eo amin'ny varavarankelin'ny fivarotana voninkazo, dia ny Orchid Lady Slipper. Tsara tarehy izy, mahavariana, mahatsikaiky, manana ny firafitry ny voninkazo orkide amin'ny endriky ny kirarom-behivavy iray. Fa ny hatsaran-tarehiny dia tsy ao anatin'izany. Ny lokony sy ny lokon'ny ravinkazo dia manome azy bebe kokoa.
Orchid Cymbidium, fitsipika momba ny fikarakarana ny lokony
Cymbidium dia voninkazon'ny fianakaviana Orchid. Ny vaovao voalohany momba izany dia niseho tany Shina maherin'ny roa arivo taona lasa izay. Na Confucius mihitsy aza dia nantsoina hoe voninkazo ho an'ny mpanjaka ny fofona. Cymbidium dia mora ny mitazona izany, izay mahatonga azy io ho malaza kokoa eo amin'ireo zaridaina, indrindra fa ireo mpangataka. Famaritana ankapobeny Cymbidium dia antsoina hoe karazana orkide tsara indrindra, izay tsy mahagaga mihitsy.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Orchid reproduction